Rikoooo.com - nsogbu na engines (# 3, ma ọ bụ # 's 3 & 4)
Jikọtara: 12 Sept 2016, 20:22
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 10 Dis 2017, 01:41
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 10 Dis 2017, 11:00
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 11 Dis 2017, 01:43
Ọ dị ka azaghị azịza m na mbụ. M na-eme ya niile site n'akwụkwọ na / ma ọ bụ "na-agụ-m si". Dị ka ọ bụla ụgbọelu ọ bụla, echere m na m kwuru, ụgbọ elu ọ bụla nwere ihe karịrị engines 2. Enwere m ike ịtọ njikwa ọsọ ụgbọ elu X-56 otu ụzọ, yana ọzọ. Mgbanwe ọ bụla na-emetụta nanị injin ndị niile aka ekpe ma ọ bụ injin niile dị mma iji nọrọ nkịtị na ndị ọzọ na-agbago. Ana m eji sfx steam mbipụta. Agwara m gị n'ihi na enwere m nsogbu ogologo oge gara aga ma ị nyere m aka na nke ahụ. Ana m arịọ mgbaghara maka iwepụta oge gị n'ọnọdụ a, chee naanị na mmadụ nwere nsogbu yiri nke a wee gwọọ ya. Onweghi ihe dika ya n’ajụjụ gị.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 26 Dis 2017, 18:01
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 27 Dis 2017, 02:28
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Gh0stRider203 » 27 Dis 2017, 07:06
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 27 Dis 2017, 17:42
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 28 Dis 2017, 01:02
N'ezie, ihe ọmụma ahụ niile adịghị mkpa. Onye ọ bụla na-eji X-55 ma ọ bụ X-56 Saitek Advanced na-achịkwa usoro nchịkwa ụgbọ elu ma na-enwe ikike ikike 1 & 2 nwere oke, achọtawo m ihe m chere bụ ọgwụgwọ. M ga-eziga nke a na mbụ, mana ọ na - ewe oge iji megharịa oge 20 a iji gosi m na ọ na - arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ. Nanị mepee "ntọala", gaa ntụgharị nke melite. Wepụ ntọala niile, mgbe ntụgharị usoro ahụ kpamkpam, na ntụgharị ahụ n'onwe ya nọ n'ọnọdụ na-abaghị uru (jide n'aka na ị ga-ahapụ mkpọchi mkpọchi na ọnọdụ ya), megharia trotul n'ụzọ niile iji mepee, laghachi na-abaghị uru, azụ iji mepee sara mbara, wee laghachi na-abaghị uru, mezie ka ọ dị na mbụ, mechie ntọala, gaa na ụgbọ elu engine 4 kachasị amasị gị ma gbalịa. Echere m na ọ na-arụ ọrụ gị dị ka ez dị ka ọ baara m.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by PAYSON » 28 Dis 2017, 01:06